SANAD KADDIB: Farmaajo & Khayrre waxay kaliya dhabjiyeen dhaxalkii ay isla dhisayeen muddo 4 sano ku dhow | Hadalsame Media
Home Maqaallada SANAD KADDIB: Farmaajo & Khayrre waxay kaliya dhabjiyeen dhaxalkii ay isla dhisayeen...
SANAD KADDIB: Farmaajo & Khayrre waxay kaliya dhabjiyeen dhaxalkii ay isla dhisayeen muddo 4 sano ku dhow
(Hadalsame) 25 Luulyo 2021 – MW Max’ed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu xilka kusoo baxay 8-dii Febraayo iyada oo ay ku hareereeysan tahay rabitaanka ruuxiga ah ee shacabka Soomaaliyeed oo aad runtii ula dhacsanaa, isagoo noqday madaxwayne ay ku toowfiiqeen dadkii ugu badnaa.
Maanta sanad ayaa kasoo wareegtey markii xilka qaab aan sharci ahayn looga qaaday RW hore 25-kii Luulyo 2020-kii, taasoo keentay inay aad isu dhinto daafaddii iyo xooggii xukuumaddii Nabad & Nolol.
Qof wax maamulaya eed iyo amaanba lehe, waxay labada nin keeneen waxyaabo ugub ah oo marka dhanka wanaagsan lagu hormaro ay ka mid ahayd inay muddo aad u dheer wada shaqaynayeen, taasoo RW Khayrre ka dhigtay midkii ugu waqtiga dheeraa, taasoo keentay xasillooni siyaadeed oo soo jiidatey beesha caalamka.
Waloow aysan sidii la rabey wax u maarayn oo ay khaladaad dhowr ah galeen meelaha qaar marka la eego siyaasadda maxalliga ah ee Soomaalida oo u baahan faham qamarshiid ah iyo xeer jajab badan, maadaama aan nahay umad aan nidaamsanayn oo hab-raaca neceb, isla markaana ay xajiintu ku badan tahay.
RW hore ee Khayrre sidaa oo kale wuxuu isu akhriyey inuu yahay ninka khadka dhexe uga ciyaara dowladda oo ah wiil hoog iyo hanad hoggaankiisa lagu hodmay oo ay tahay inuu isagu noqdo musharraxa qura ee nidaamka hadda jira. Kaddib waxaa bilowday khilaaf suus ah oo muddo sanad ah qaacayey. Taasoo ka dhigan in nin kasta oo kitaabkiisa nacam nacam ku qortay waase aragti khiyaali ah.
Ugu dambayn waxay ku dhamaatay in MW Farmaajo uu isku qanciyo inuu bedelo Khayrre oo isaga laftiisu raadinayey meel uu tareenka uga dego. Wuxuuna taa u maray qaab sharci darro ah oo uu aad ugu sii sumcad beelay.
Maanta midkoodna ma laha caraftii shalay. Mid isaga oo mucaarad ah ayuu ku faraq xirtey koox qayb ahaan danleey ah oo jahawareersan oo sidii NGO u shaqaysata qaarkoodna aanay dalkaba u roonayn, balse ashaamudnimada hebel diidka ah markii laga yimaado aan aad loo hubin inay leeyihiin wax qorshe ah oo dhexe, taasoo halisteeda leh.
Midkale, wuxuu ag taagan yahay raqda nidaamkiisii mar la jeclaa oo inta meel walba kasoo layruubay oo ka candharay ay ruuxdku ka baxday, kaasoo ay ka tala bixinayaan rag isaga siinaya aragtiyo gaaban oo howtal hamag ah iyo siyaasad muujinaysa naf la caarinnimo iyo jid iyo jaho la’aan.
Halkaa waxaa ku dhintay dhaxalkii Farmaajo & Khayrre oo gacantooda ku dhabjiyey wixii ay 4 sano ku dhowaad isla dhisayeen, iyagoo haddii ay farsamo iyo xikmad yar ku daraan maanta gaariga boosteejada soo taagi kari lahaa iyagoo weli karaamo leh isla markaana aan kala dhimanin, dad kalena aan ku tuman.
Waxaa ugu qosol badnayd markii uu Farmaajo diidey inuu Khayrre xilka ku wareejiyo RW Rooble oo uu ka hadlo wixii uu qabtay 3.5 sano, taasoo u fasirmaysa in Farmaajo uu sidoo kale diidey oo dhaxal wareejinayo waxqabadkiisii.
Previous articleMaraykanka oo sharraxaad yaab leh ka bixiyey sababta ku kalliftay inuu dib u bilaabo duqaymihii Somalia
Next articleFaransiiska & Israel oo qoorta iskula jira (Lambarka MW Faransiiska oo lagu arkay liiska….)